DHEGEYSO-Madaxweyne Ku-xigeenka oo booqday goobihii laqarxiyey. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Madaxweyne Ku-xigeenka oo booqday goobihii laqarxiyey.
Agoosto 22, 2016 4:22 b 0
Galakcyo, Aug 22 2016–Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng Cabdxakiin Cabdlaahi Xaaji Cumer Camey oo Gaalkacyo gaaray goor sii horaysay ayaa booqday Dhawacyadii shalay ka dhashay Labadii qarax ee is-xig-xigay ee Ururka Shar-wadayaasha ay ku qaaden Xarunta D/hoose ee Degmada Gaalkacyo.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ENG Camey oo kadib booqashadiisa warbaahinta la hadlaya ayaa sheegy in Dalka dibadiisa lo qaadi-doona dhaawacayda Halista ah ee ku waxyeeloobay qaraxyadii shalay gil-gilay Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobalka Mudug.
DHEGEYSO-Barnaamikii Xulashada Daljir iyo Xuseen Madar.